Archdiocese of Mandalay blog: နေ့စဉ်ဘုရားတရားရှိပြီး သဒ္ဒါကြည်ညိုခြင်းအတိ လွှမ်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်
နေ့စဉ်ဘုရားတရားရှိပြီး သဒ္ဒါကြည်ညိုခြင်းအတိ လွှမ်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်
မေး။ ။ ဘုန်းဘုန်းဘုရား- တပည့်တော်ဟာ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် ဘုရားတရားရှိပြီး သဒ္ဒါကြည်ညိုခြင်း အတိ လွှမ်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် ဘာတွေ ပြုမူဆောင်ရွက် ရမလဲဆိုတဲ့ အချက်များကို ဖြေကြား လမ်းညွှန်ပေးပါဘုရား။
ဖြေ။ ။ ဒီမေးခွန်းကို စကားလေး တစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ဖြေရမယ်ဆိုရင် ရိုးရိုးကျင်၊့ မြင့်မြင့်ကြံပေါ့။ အဓိပ္ပါယ်ကနေ့စဉ် သမရိုးကျ လုပ်သမျှ၊ ကြံသမျှ၊ စံရသမျှ၊ ခံရသမျှအားလုံးကို ဘုရားရှင်အား ပူဇော်ပြီး အသက်ရှင်ရင်း ဘုရားရှေ့မှာ တရားဝင်တယ်။ တစ်ချက်ခုတ် သုံးလေးချက် ပြတ်တယ်။ တမလွန်ထိပါတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တွေဖြစ်တယ်။ ကောင်းကင် ဘဏ္ဍာဖြစ်လာတယ်။
(ရှင်မာဿဲခရစ်ဝင်-၆း ၁၉- ၂၁) မှာ သံချေးပိုးရွ ဖျက်ဆီး၍ သူခိုး မထွင်းမဖေါက် မခိုးမယူရာ ဘဏ္ဍာရှိ၏။ ထိုအရပ်၌ သင်တို့ စိတ်နှလုံးသည်ရောက်တတ်၏။ မိမိရဲ့ ဘဏ္ဍာဟာ လောကမှာလား၊ ကောင်းကင်ရွှေပြည်မှာလား ဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ရပါမယ်။ ဒီလ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို အချက် (၁၈) ချက်နဲ့ အကျယ်တ၀င့်ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဘုရားတရားရှိတဲ့ အသက်တာ၊ သဒ္ဒါ ကြည်ညိုခြင်းရှိတဲ့ အသက်တာဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် နေ့စဉ် လိုက်ရှောက်ရမယ့် အချက် (၁၈) ချက်ရှိပါတယ်။
(၁) How should we begin the day? တစ်ရက်တာနေ့သစ်ကိုဘယ်လို အစပြုမလဲ။
အိပ်ရာမှနိုးသောအခါ ခရစ္စတူး အမှတ်ကို တားပြီး နေ့စဉ် နံနက် ပူဇော်ခြင်း မေတ္တာကို ရွတ်ဆိုလျက် ကိုယ်စိတ်နှလုံး သုံးပါးကို ဘုရားသခင်ထံ ပူဇော်ရပါမည်။
(၂) How should we rise in the morning ? မနက်စောစော အိပ်ယာက ဘယ်လို နိုးကြမလဲ။
လုံ့လ ၀ီရိယနဲ့ ကြိုးစားကာ၊ ကာအိ နြေ္ဒရှိရှိ၊ အ၀တ်ဖိုး ရို့ဖားရားမဟုတ်ဘဲ ကောင်းကောင်းဝတ်ပြီး ဒူးထောက်၍ ဆုတောင်းမေတ္တာ ဆိုလျက် ပူဇော်ရပါမယ်။
(၃) မစ္ဆားပူဇော်ခြင်း၌ ပါဝင်ခွင့်ရှိလျှင် သဒ္ဒါကြည်ညိုခြင်း အပြည့်နဲ့ ပါဝင် ပူဇော်ရပါမယ်။
(၄) ရဟန္တာ သူတော်သူမြတ်တိုင်းသည် ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုကြတယ်ဆိုတော့ နေ့စဉ် ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(၅) ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုတဲ့နေရာမှာ ဘာတွေကို ရှုသင့်သလဲ ဆိုရင် သေခြင်း၊ တရားစီရင်ခြင်း၊ ငရဲနဲ့ ကောင်းကင်သုခချမ်းသာ အကြောင်း၊ ခရစ်တော်ရဲ့ သက်တော်စဉ် အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်ရှင် ခံထမ်းတော်မူခဲ့သော ဒုက္ခ စရိယာ အကြောင်းတို့ကို ရှုရပါမယ်။
(၆) ကောင်းသော စာပေများကို မကြာခဏ ဖတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာကို အနည်းဆုံး (၁၅) မိနစ်ခန့် ဖတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဧ၀ံဂေလိ ကျမ်းလေးစောင်ကို ဦးစားပေး ဖတ်ရှုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရဟန္တာ သူတော် သူမြတ်ရဲ့သက်တော်စဉ်များ၊ အခြားဝိညာဉ် ခွန်းအား ရစေတဲ့ ဘာသာရေးစာပေများကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
(၇) စားသောက်စဉ်၊ အနားယူစဉ်၊ အပန်းဖြေစဉ် အလွန်အကျွံ မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ကိုသာ ကျေနပ်စေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(၈) အစာမစားခင် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းပြီးမှ သုံးဆောင်လျက် ပြီးလျှင် ကျေးဇူးတင် မေတ္တာဆိုပါ။
(၉) တစ်နေ့လုံး ပြုလုပ်သမျှ ဆောင်ရွက် သမျှတို့ကို စင်ကြယ်မြင့်မြတ်စေဖို့ ဘုရားကို မကြာခဏ စိတ်ထဲက တိုးတိုးလေး စကားပြော ဆုတောင်းပြီး၊ မိမိ စိတ်နှလုံးကို ဘုရားသခင်ဆီ တင်ပူဇော်ဖို့ လိုပါတယ်။
(၁၀) မာရ်နတ်ရဲ့ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်း ခံရချိန်မှာ ဘုရားဆီ ဆုတောင်းပြီး၊ ကယ်မတော်မူပါ သခင်။ ပျက်စီးခြင်းမှ ကင်းဝေးစေတော်မူပါဘုရား ဆိုတဲ့မေတ္တာတိုလေးများကို ဆုတောင်းတတ် ဖို့လိုပါတယ်။ အောင်မြင်အောင်ကြိုးစား၊ တစ်ခုခုနဲ့ အစားထိုးပါ။
(၁၁) အပြစ်ထဲ မတော်တဆကျ သွားခဲ့မိရင် ချက်ချင်း ဆုတောင်း၊ နောင်တယူပြီး စုံလင် သော နာကျင်ခြင်းနှင့် ခရစ်တော်ထံ အခွင့်တောင်းပါ၊ အသနားခံပါ၊ နောက်တဖန် မဖြစ်ရန် ကြိုးစားမည်ဟု ကတိထားပါ။ အပြစ်ကြီး ဖြစ်လျှင် အမြန်ဆုံး အာပတ်ဖြေနိုင်ပါက အာပတ်အမြန်ဖြေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(၁၂) အနာရောဂါ စွဲကပ်ချိန်၊ ရောဂါခံစားနေရသောအခါ အိုသခင် ကိုယ်တော်၏ အလိုတော်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေ။ တပည့်တော် ပြုခဲ့မိသော အပြစ်များအတွက် ဒဏ်ဆပ်ဖြေသောအားဖြင့် ခံထမ်း ပူဇော်ပါ၏လို့ တဖွဖွ ပူဇော် ဆုတောင်းတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(၁၃) အန်ဂျေလူးမေတ္တာ တစ်ရက်သုံးခါ နံနက်တစ်ကြိမ်၊ မွန်းတည့်တစ်ကြိမ်၊ ညနေခင်းတစ်ကြိမ် ခေါင်းလောင်းထိုးချိန်၌ ဆိုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုရခြင်းအကြောင်း က တော့ မယ်တော်သခင်မနဲ့ သခင်ယေဇူးအား ကျေးဇူးတင်ဆပ်ရန် ဖြစ်တယ်။
(၁၄) စကားစမြည် ဆုံဆည်းပြောဆိုတဲ့အခါ သူတစ်ပါးအကြာင်း မကောင်းပြောဆိုခြင်း၊ မုသားပြောဆိုခြင်း၊ ညစ်ညမ်းစွာပြော ဆိုခြင်းစတဲ့ အပြောအဆိုများကို ရှောင်ရှားရပါမယ်။
(၁၅) ကျေးဇူးတော်တစ်ခုရလျင် ကျေးဇူး တော်ကို သိမှတ်နှလုံး သွင်းရမယ်။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတရား တိုးပွားအောင်၊ တည်မြဲအောင် ကြိုးစားရမယ်။
(၁၆) ညအိပ်ရာမ၀င်မီ တစ်နေ့တာ အတွင်း ပြုမိခဲ့သော အပြစ်ဟူအမျှကို ပြန် သတိရနိုင်ဖို့ ကျေးဇူးတော် တောင်းခံ ရပါမယ်။ ပြီးရင်ပြုခဲ့မိသော အပြစ်အရေအတွက် များနဲ့ခံစားရရှိသော ကျေးဇူးတော်များကို ရေတွက်စစ်ဆေး၊ စီစစ်ပါ။ ဘုရားရှင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ။ အပြစ်များအတွက် အခွင့်တောင်းပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ရွှေလက်တော်၌ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကို အပ်နှံပူဇော် လိုက်ပါ။
(၁၇)နောင်တယူပြီး ညမေတ္တာဆို အပ်နှံပူဇော်ပါ။
(၁၈) ညအိပ်ရာဝင်စဉ် ကာအိနြေ္ဒသိက္ခာရှိရှိ အ၀တ်အစားလဲလှယ်ပြီး ခရုတူးမှတ် အသား ပြု၊ ဘုရားသခင်၊ မယ်တော်သခင်မ၊ ကိုယ် စောင့်သိကြားတို့အား အပ်နှံ၊ ကောင်းသော သေခြင်းနှင့်သေရအောင် ဆုတောင်းပါလို့ ဖြေကြားလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 5:04 PM